लेखकको आँखामा गुफा गाउँ
जेठ १६, २०७५ | काठमाडाैं
प्राकृतिक सुन्दरताको अनुपम उपहार हो गुफा गाउँ । यो सिन्धुपाल्चोक जिल्ला मेलम्ची नगरपालिका वडा नं. ९ मा पर्दछ । काठमाडौंदेखि ३९ किमीको दुरीमा पर्ने गुफा गाउँ प्राकृतिकले भरिपूर्ण छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको लागि यो एकदमै सुन्दर स्थान हो । पर्यटनको लागि एकदमै सम्भावना रहेको यस गाउँमा जात जातिहरूकाे मिश्रित बसाेवास रहेकाे छ । यहाँ आर्गनिक कृषि खेती गर्छन् । जहाँ आलु, मकै, गहुँ, तरकारी लगायत थरीथरीका उब्जनी हुन्छन् ।
जेठ १२ गते शनिबार एक विहानै एक हुल लेखक, पत्रकार, कवि, साहित्यकारहरुको टोली त्यसतर्फ लागे । जहाँ गुफा गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन समितिद्धारा आयोजित अन्तरक्रिया तथा पत्रकार भेटघाट र त्यस गाउँको प्रचारप्रसार गर्नु थियो ।
पर्यटनको लागि सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रलाई प्रचारप्रसारको कमीले ओझेल परेका महसुस गरेका छन् ।
तामाङ पत्रकार संघको संयोजनमा काठमाडौंबाट पुगेका पत्रकार र साहित्यकारको टोलीले गुफा चौर, क्याउलेठाना, नौलिङ्गेश्वर महादेवको अवलोकन गरे । सबैले क्यामेरामा तस्विर कैद गर्नेदेखि आ-आफ्नो शब्दमा त्यहाँका भावहरू उतारेका छन्, प्रस्फुटन गरेका छन् । सबैले सामाजिक सञ्जालमा त्यहाँका तस्विर भरेका छन् । पर्यटनको लागि सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रलाई प्रचारप्रसारको कमीले ओझेल परेका महसुस गरेका छन् ।
भर्खरै स्थानीय तहबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि वडा नं. ९ वडाध्यक्ष कमलबहादुर खड्काले पनि यस ठाउँलाई प्रचारप्रसार गर्न अनुरोध गरेका थिए । यस क्षेत्रलाई पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्न गुरु योजना बनाएर अगाडि बढाएको उनले सुनाए । उनले भने, प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण रमणिय स्थल गुफा क्षेत्र पर्यटनको प्रवल सम्भावना बोकेको ठाउँ भएकाले यसलाई प्रचारप्रसार गर्न सके यस क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन टेवा पुग्ने छ ।
सडक सञ्जाल जोडिदैछ । सडकको स्तरोन्नतिका लागि बजेट व्यवस्थापन पनि भएको वडाध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए । सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक र विकासको दृष्टिकोणले पछि रहेपनि समृद्धिको लागि पर्यटन क्षेत्र ठुलो सम्भावना रहेको नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति आइतमान तामाङको भनाई छ ।
यहाँबाट जिल्लाकै प्रसिद्ध मेलम्ची, गुफा, ठुलो ओख्रेनी, गोब्रे, हेलम्बु, आमाह्योल्मो, पाँचपोखरी लगायत पुग्न सकिनेछ ।
यहाँका भाषा, कला, धर्म लगायत प्राकृतिक सौन्दर्य उत्तिकै आकर्षक छ । यस क्षेत्र पदयात्राका लागि मात्रै नभएर अध्ययन केन्द्र पनि हो, स्थानीय बताउँछन् ।
यस क्षेत्रलाई पर्यटन प्रवद्र्धनमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगरपालिका र पर्यटन बोर्डले जोड दिए समृद्धितर्फ उन्मुख हुनेछ ।